Moate Lodge dia trano fiompiana Zeorziana 250 taona any ambanivohitra Kildare ary toerana fandriam-pahalemana sy filaminana eo akaikin'i Athy. Tompon'ny sy tantanan'i Raymond sy Mary Pelin. Ny fampiantranoana nentim-paharazana Irlandey miaraka amin'ny fiheverana manokana dia manome antoka ny fampiononana sy ny fiarovana anao.
Naorin'ny Duke of Leinster, Moate Lodge dia nanomboka tamin'ny 1776 ary miorina eo amin'ny faran'ny làlambe tsy miankina iray izay mankany amin'ny tampon'ny trano. Ireo efitrano fandraisam-bahiny enti-mihetsika 4 mahafinaritra rehetra dia natao miaraka amin'ny fampiononanao ary misy fanaka fahagola.
Matory amin'ny lambam-pandriana faran'izay tsara ary mifohaza amin'ny fijery mahafinaritra ny lafin'ny firenena mihodina. Safidio ny sakafo maraina vao avy nomaninao tao amin'ny efitrano fisakafoana feno masoandro. Ny menio sakafo maraina be dia be dia be dia tamin'ny 7.00 ka hatramin'ny 10.30 maraina ary misy voankazo vaovao, yaorta, fromazy, mofo an-trano, serealy, porridge, atody voajanahary avy amin'ny toeram-piompiana sy ny sakafo maraina Irlandey malaza, miaraka amina paoma manokana izay mampiavaka ny isa-maraina.
Tongasoa ny mpitsangatsangana manodidina ny toeram-piompiana. Betsaka ny zavatra azon'i Raymond holazaina anao momba ny tantara eo an-toerana, ny ady an-trano amerikana, ny ady lehibe 2 ary ny rugby irlandey ka tsy maintsy ho avy ianao hiaina ny tranomboky ady ho anao.
Bed & Breakfast, Budget, Sariaka amin'ny biby, Mpinamana, 3 Star, Athy
Athy, County Kildare, Irlandy.